Cilmibaaris: Murqaha dabacsan oo sababa in horay loo geeriyoodo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cilmibaaris: Murqaha dabacsan oo sababa in horay loo geeriyoodo
La daabacay onsdag 21 november 2012 kl 15.31
Murqaha tabarta daran ayaa hor-seeda in hore loogu dhinto, sida ku cad baaritaan caalami ah oo ey ka qeyb-qaateen culimo ka howl-gasha machadka caafimaadka ee Karolinska. Waxaa kaloo lagu ogaadey iney tirada ragga u geeriyooda kor u sii kaceyso, kuwaasi oo lahaa gacmo, jilbo iyo calaacallo dabacsan kolkii ey marayeen tijaabadii shaqada qaranka.
Suurtagalka dadyoowga murqaha adag iney geeridaa ka baxsadaan ayey u leeyihiin 30% marka loo barbar-dhigo kuwooda murqaha dabacsan. Cilmi-baaristan ayaa lagu soo bandhigay maanta joornaalka caafimaadka ee British Medical journal. Finn Rasmussen, waa caalin ka howl-gala machadka caafimaadka Karolinska ee degmada Solna:
- Waxaan caddeeyney in dabacsanaanta muruqyada ee ragga da'da yar ey keenaan iney hore ugu dhintaan dhammaan cudurrada wadnaha, cudurrada xididdada iyo qudha oo la iska jaro.
Macnuhu maaha in dabacsanaanta murquhu sababaan in horay loogu geeriyoodo, hase yeeshee ey dadka dabacsan u sahlan tahay iney hore u asiibto geeridu guud waxa loo yaqaanno. Sidoo kale waxaa la dareemeyaa iney kor ugu kaceen geerida ey sababaan cudurrada aan kor ku soo sheegnay iyo is-dilkaba.
Iyadoona uu Finn Rasmussen oo ka howl-gala machadka caafimaadka ee Karolinska sheegay in looga hor-tegi karo amuurtaa iyada oo la sameeyo tababar sahlan. Looma baahna in la isku xiijiyo tababar sidaa u adag.
Dabacsanaanta murquhu maahan macnaheeda cayilka, hase yeeshee waxaa war-bixinta ku caddaatay in dadyoowga murqahoodu dabacsan yihiin ey sidoo kale halis u yihiin cayilka iyo dhiig-karta.
Tababar ma sameeysaa?
Waan jeclaan lahaa
Wakhti uma hayo